Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Recently Read
Posted on May 4, 2016 by freeburma
ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းဝန်းမှာ စေတီတစ်ဆူ ထပ်မံတည်ဆောက်ပြီးစီး
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ကွမ်းတောကျေးရွာက ရှင်မာကုအင်္ဂလီကန် ဘုရားကျောင်းဝန်းအတွင်း မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်မှ နောက် ထပ်စေတီတစ်ဆူတည်ရာမှာ မနေ့က ညပိုင်းက စေတီကို ညတွင်းချင်း အပြီးတည်ပြီးသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1ZdN0Dx http://www.rfa.org
Posted in Ethnics, Recently Read, RIghts	| Tagged Ethnics, Feedly, IFTTT, Recently Read, RIghts	| Leaveacomment |
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ ကို အသရေ ပျက်စေသည့် ပုံများ တင်သူ ဦးနေမျိုးဝေ အမှုဖွင့်ခံရ
“လောလောဆယ် တရားခံကို ကူညီစုံစမ်း ဖမ်းဆီးပေးပါဆိုပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့မ ရဲစခန်းကို လှမ်းပြီး အကြောင်းကြားထား တယ်။ ဒီကနေ ဖက်စ်နဲ့ လှမ်းပို့ထားတယ်” ဟု ကန်ကြီးထောင့်မြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် သိန်းလွင်က ပြောသည်။
The post နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ ကို အသရေ ပျက်စေသည့် ပုံများ တင်သူ ဦးနေမျိုးဝေ အမှုဖွင့်ခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1ZdMZPW http://ift.tt/1PXzsvq
Posted in Recently Read, RIghts	| Tagged Feedly, IFTTT, Recently Read, RIghts	| Leaveacomment |
ခရစ်ယာန်ကျောင်းဝန်းထဲ မှာ စေတီတစ်ဆူ ထပ်မံတည်
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ကွမ်းတောကျေးရွာက ရှင်မာကုအင်္ဂလီကန် ဘုရားဝန်းအတွင်းမှာ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် က မနေ့မနက်ကစပြီး စေတီတစ်ဆူ ထပ်မံတည်နေပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1Zb2wQL http://www.rfa.org
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆန္ဒပြအလုပ်သမားအရေး ပြေလည်မှုမရ
"သူတို့က ကျနော်တို့ကို တိုင်းခုံသမာဓိကနေပြီးတော့ အမိန့်ချထားတာရှိတယ်လေ။ တိုင်းခုံသမာဓိရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဒီအလုပ်သမားအားလုံးကို အလုပ်ပြန်ခန့်လိုက်ပါ။ သို့သော်…."
via Voice of America http://ift.tt/1rT7QOu http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Protests, Recently Read	| Tagged Feedly, IFTTT, Protests, Recently Read	| Leaveacomment |
အစိုးရသစ်ကို ဂုဏ်ပြု၍ တစ်ကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်နေသူ ဆေးကုသမှုခံရသော်လည်း ပြီးဆုံးသည်အထိ လျှောက်မည်ဟုဆို
အစိုးရသစ်ကို ဂုဏ်ပြုကာ တစ်ကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်နေသည့် ဦးအောင်သူ (ဓာတ်ပုံ – ဟိန်းအာကာ)
အစိုးရသစ်ကို ဂုဏ်ပြု သည့်အနေနှင့် တစ်ကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်ခြင်းအစီအစဉ် စတင်ပြုလုပ်နေသည့် မြိတ်ဒေသခံ ဦးအောင်သူသည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ နီးစပ်ရာပြည်သူ့ ဆေးရုံများတွင် ဆေးကုသနေရသော်လည်း လမ်းလျှောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို ပြီးဆုံးချိန်အထိ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင် ကျော်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဦးအောင်သူသည် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခုစလုံးမှ မြို့ နယ်ပေါင်း ၅၉ မြို့ကို ဖြတ်သန်း ကာ တစ်ကိုယ်တော် လမ်း လျှောက်မည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် အဆုံးသတ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်ကို မြိတ်မြို့ မှ ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် စတင်ထွက် ခွာခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အရ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ပလောက်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် သရက်ချောင်း ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြိတ်မြို့မှ မိုင် ၁၅၀ ကွာဝေးသည့် ထားဝယ်မြို့သို့ မေလ ၂ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာသည်။
‘‘လမ်းမှာ ပလောက်ဆေးရုံ နဲ့ သရက်ချောင်းဆေးရုံတွေမှာ လည်း ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရ တယ်။ ဆရာဝန်တွေကတော့ နှလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီး ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ အကြံပေး ကြပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရတာ ကလည်း ရာသီဥတုအခြေအနေ အရ ထင်သလောက်အဆင်မပြေ ပေမယ့် ခရီးစဉ်အောင်မြင်တဲ့အ ထိ ဆက်လျှောက်သွားမှာပါ။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ကုသ၊ စစ်ဆေးဖို့ ထပ်လိုခဲ့ရင် လည်း အခုလိုနီးစပ်ရာ ဆေးရုံ တွေမှာ ဝင်ရောက်ကုသမှုပြုလုပ် သွားပါ့မယ်’’ဟု အသက် (၄၆)နှစ် အရွယ် ဦးအောင်သူက ပြော သည်။
ယခုခရီးစဉ်အတွက် လမ်း လျှောက်ရာတွင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် ရာသီဥတုအခြေ အနေအရ တစ်နေ့လျှင် မိုင် ၂၀ ခန့်သာ ခရီးပေါက်နေပြီး ယခင် ခရီးစဉ်များ၏ တစ်နေ့ရောက်ရှိနိုင်သည့် မိုင်နှုန်းထက် ထက်ဝက်ခန့် လျော့နေကြောင်း ဦးအောင်သူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယခင်လမ်းလျှောက်ဂုဏ်ပြု သည့် ခရီးစဉ်များတွင် ညအိပ်ရပ် နားရာ နေရာများ၌သာ အနားယူ လေ့ရှိပြီး နေ့စဉ်ပုံမှန်လမ်း လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ယခုအခါ ဆေးဝါးကုသနေရသောကြောင့် နားရက်များပါ ရှိလာကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် ရာသီဥတုပူပြင်း သောကြောင့် ယခင်ခရီးစဉ်များ ကဲ့သို့ အချိန်ပြည့်လမ်းလျှောက် ခြင်းမပြုဘဲ နံနက် ၆ နာရီမှ နေ့ လယ် ၁၁ နာရီအထိသာလျှောက် ပြီး ညနေ ၃ နာရီမှ ပြန်လည်ခရီး ဆက်နိုင်သည်ဟု ပြောသည်။
ဦးအောင်သူသည် မြန်မာ နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့သည့် အရှေ့တောင် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၂၀၁၃ ဩဂုတ်တွင် မြိတ်မြို့မှ နေပြည်တော် အထိနှင့် အောက်တိုဘာ၌ ကော့သောင်းမှ နေပြည်တော်အထိ တစ်ကိုယ်တော်လမ်းလျှောက် ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အ ဖြစ် ပွဲတော်ကာလအမီ ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီမှစတင်ကာ မြိတ်မြို့မှ နတ်မောက်မြို့သို့ တစ်ကိုယ် တော် လမ်းလျှောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင် ကျော်အား ဂုဏ်ပြုခြင်းအဖြစ် လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ဦးအောင်သူ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဂုဏ်ပြုလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်သည်။
ဦးအောင်သူသည် အသက် (၄၆)နှစ်ရှိပြီး လက်ရှိတွင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေသဖြင့် မေလ ၄ ရက်၌ ထားဝယ်မြို့မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
via News http://ift.tt/23nVnh4 http://ift.tt/1Vus636
Posted on April 29, 2016 by freeburma
Dozens of workers fromaplywood factory in Sagaing Industrial Zone march to Naypyidaw to protest for labor rights, afteradispute over working hours.
The post Sagaing Workers March to Naypyidaw to Protest for Labor Rights appeared first on The Irrawaddy.
via The Irrawaddy http://ift.tt/1rFgIXX http://ift.tt/1lOxGiU
Posted on April 20, 2016 by freeburma
Esther Htusan belongs to an Associated Press team awardedaPulitzer Prize for an investigation into labor abuses within Southeast Asia’s fishing industry.
The post Burma Celebrates First Pulitzer Prize-Winning Female Journalist appeared first on The Irrawaddy.
via The Irrawaddy http://ift.tt/23IH1NC http://ift.tt/1lOxGiU
Posted in Press, Recently Read	| Tagged Feedly, IFTTT, Press, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on April 15, 2016 by freeburma
ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှု အဆုံးသတ်ဖို့ အစိုးရသစ်ကို တိုက်တွန်း
မြန်မာအစိုးရသစ်အနေနဲ့ ဘာသာရေး ဒါမှမဟုတ် ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ နှစ်သစ်ကို စတင်ပါလို့ နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်ကော်မရှင် USCIRF က တိုက်တွန်းပြီး မြန်မာလူထု ကိုလည်း နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်လို့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တစုံလုံးတိုးတက်စေဖို့ ဆက်ပြီး အားပေးကူညီကြဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုက်အ၀န်းကို လည်း USCIRF ကတိုက်တွန်းပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း ရွေးချယ်ခံ…
via Voice of America http://ift.tt/265MnkV http://ift.tt/Tf1V41
Posted on April 14, 2016 by freeburma
လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းစက်ရုံ အက်ဆစ်နံ့ ရွာသားတွေကန့်ကွက်
"ရွာသား ၄-၅၀ လောက်နဲ့ အက်ဆစ်ကန်ရှေ့ကို သွားပြီးတော့ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆို တယ်။ တောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ တစုံတယောက် တာဝန်ရှိသူ ဘယ်သူကမှ ဖြေရှင်းမပေးဘဲနဲ့…"
via Voice of America http://ift.tt/1VXsub5 http://ift.tt/Tf1V41
Posted on April 13, 2016 by freeburma
မင်္ဂလာဒုံ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖျက်ဆီးခံရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပေါင်းကူး ဥာဏတောင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ နိသာကရာ ရာမ မိုးကောင်း ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှာ ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက် လုပ်နေတာကို လူအင်အား ၃၀ လောက်က မနေ့ည က နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားတယ် လို့ ကျောင်းတိုက်တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1T4DsZP http://www.rfa.org
Posted on April 9, 2016 by freeburma
အမျိုးသားပညာရေး သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက် ၁၁ ချက် မရသေးတဲ့အတွက် ကျောင်းသားသပိတ် မလှန်သေးတာလို့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၊ သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေး[…]
The post ကျောင်းသားသပိတ် မလှန်သေးဟုဆို appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/22k7J9x http://burmese.dvb.no
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးနေမှုများ ရပ်တန့်ပေးရန် ဆန္ဒပြ (ဓာတ်ပုံ)
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (အေအေ) ကို တပ်မတော်ဘက်က ထိုးစစ်ဆင်နေမှု၊ ရခိုင်ပြည်အနှံ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီး သံသယနဲ့ဖမ်းဆီးနေမှုတွေ ရပ်[…]
The post ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးနေမှုများ ရပ်တန့်ပေးရန် ဆန္ဒပြ (ဓာတ်ပုံ) appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1qDNVCJ http://burmese.dvb.no
Posted on April 6, 2016 by freeburma
နိုင်ကျဉ်းလွှတ်ဖို့ ဆုတောင်းသူတွေ တရားစွဲခံရ
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကျောင်း သား ကျောင်းသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားတွေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့သူ ၆ဦးကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ မြို့နယ်တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1SQqMpq http://www.rfa.org
Posted in Political Prisoners, Recently Read, RIghts	| Tagged Feedly, IFTTT, Political Prisoners, Recently Read, RIghts	| Leaveacomment |
သပိတ်မှောက် လုပ်သားများ မြို့တွင်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြ
စစ်ကိုင်းမြို့ပတ္တမြားစက်မှုဇုန်က Myanmar Veneer သစ်အချောထည်စက်ရုံရှေ့မှာ တစ်လကျော်ကြာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီး ဆန္ဒပြနေတဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ဟာ ဒီကနေ့ စစ်ကိုင်းမြို့မှာ လှည့်လည်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1WcHIJJ http://www.rfa.org
Posted on April 4, 2016 by freeburma
သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ ကန့်သတ်မှု ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်းလင်း
ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနှစ်မဏ္ဍပ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ခွင့်ပြုထားတာကို အနုပညာ ရှင်တွေအနေနဲ့ နားလည်မူရှိရှိ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပေးကြဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်း သိန်း တိုက်တွန်းပြောကြားပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1UQLv09 http://www.rfa.org
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ငှက်လွှတ်ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်(ဓာတ်ပုံ)
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဖမ်းဆီးခံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ငှက်လွှတ်ဆုတောင်းပွဲကို ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့[…]
The post နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ငှက်လွှတ်ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်(ဓာတ်ပုံ) appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1UCvgDg http://burmese.dvb.no
၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလ သေဆုံး ပျောက်ဆုံးစာရင်း စုဆောင်းနေ
"သမိုင်းမှတ်တိုင်တခုအနေနဲ့ ကျနော်တို့ စာရင်းပြုစုပြီးတော့ ထုတ်ပြန်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က ဆောင်ရွက်နေတာပါ။အဲ့ဒီ့တုန်းက ကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေမှာ အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ကို ဒီလိုစာရင်းတွေ ပေးတိုင်း ပြန်ပြီးတော့ Confirm လုပ်မှာပါ ။ လုပ်ပြီးတော့မှ
via Voice of America http://ift.tt/1RHnlie http://ift.tt/Tf1V41
Posted on April 3, 2016 by freeburma
ပဲခူးရွှေမော်ဓောစေတီအနောက်ဘက်မုခ်ရှိ ပန်းချီကား ပြန်လည်ရေးဆွဲပေးရ
ပန်းချီကားကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Wai Yar Aung Myint)
ပဲခူးမြို့ရွှေမော်ဓောစေတီတော် အနောက်ဘက်မုခ်ရှိ ပန်းချီကား အမှတ်(၁၆)တွင် ရေးဆွဲထားသည့် ကာချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်တို့၏ပုံကို သက်ဆိုင် ရာက လာရောက်ဖျက်ခိုင်းသဖြင့် ပြန်လည်ရေးဆွဲပေးခဲ့ကြောင်း ပန်းချီဆရာ ဦးအောင်လှိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပဲခူးတိုင်း နယ်လုံဝန်ကြီးနှင့် ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတို့က ကာယကံရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ အသုံးပြုခဲ့သဖြင့် ကာယကံရှင်ဘက်က ခွင့်မပြုကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့အား ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကာချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ပုံကို ပြန်ဖျက်ခဲ့ရကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးကြည်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
‘‘နယ်လုံဝန်ကြီးနဲ့ ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလာပြီး ကာယကံရှင်ခွင့်ပြု ချက် ရလားမေးတယ်။ ပန်းချီ ဆရာက သူ့စိတ်ကူးနဲ့ ဆွဲတာဆို တော့ ကာယကံရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကယယံရှင် က ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုတာကြောင့် ပြန်ဖျက်ခဲ့ရတာပါ’’ဟု ဦးကြည် ဝင်းက ပြောသည်။
ဧပြီ ၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ခန့်က ဂေါပကအဖွဲ့က ကြေညာ ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကာ ချက်ချင်းပြန် ပြင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ပန်းချီကားတွင် ကာချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တို့၏ပုံကို ဖျက်ခဲ့သော် လည်း ပန်းချီကား အမှတ် (၁၅) တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ပုံကို မူလအတိုင်းထားရှိထားကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
‘‘ဂေါပကအဖွဲ့က စာထုတ် ခဲ့တယ်။ ဒီပုံကို ပြန်ပြင်ရေးပေးပါ ဆိုလို့ ပြန်ပြီးရေးပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က ဂုဏ်ပြုတဲ့သဘောနဲ့ ဆွဲ ထားတာပါ။ ဘယ်သူ့မှ ထိခိုက် စေချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး’’ဟု ဦးအောင်လှိုင်ဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် လူထုခေါင်းဆောင်တို့ ပါဝင်နေသည့် ပန်းချီကားမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတွေ့ဆုံမှုကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်လှိုင်ဦးက ပြောသည်။
ရွှေမော်ဓော စေတီတော် တွင် ဘုရားသမိုင်းအကြောင်း ဘုရားဖူးများ သိရှိစေရန် ပန်းချီ ကား ၂၃ ချပ် ရေးဆွဲစေခဲ့ပြီး ပန်းချီကား အမှတ် (၁၅) ၌ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၏ ကိုယ်လုံးပြည့်ပုံနှင့် ပန်းချီကား အမှတ် (၁၆)တွင် ကာချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဘုရားအကြောင်း ရှင်းပြနေသည့် ပုံတို့ကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
via News http://ift.tt/1Rxr05F http://ift.tt/1Vus636
Posted on April 2, 2016 by freeburma
အွန်လိုင်းမီဒီယာများ အကယ်ဒမီပွဲသတင်းယူလိုလျှင် ကျပ်ဆယ်သိန်းပေးသွင်းရမည်
သတင်းယူခွင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခကြေးငွေ နှုန်းထားကတော့ ရုပ်သံမီဒီယာများကို ကျပ် သိန်း ၁၅၀၊ FM များကို ၃ သိန်းစီ နဲ့ Online မီဒီယာများကိုတော့ ကျပ်၁၀ သိန်း သတ်မှတ်ထားတာပါ
The post အွန်လိုင်းမီဒီယာများ အကယ်ဒမီပွဲသတင်းယူလိုလျှင် ကျပ်ဆယ်သိန်းပေးသွင်းရမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1W0YZFw http://ift.tt/1OYtTeJ
ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားနှင့် နိုင်ကျဉ်းများလွတ်မြောက်မှ မ၀င်းမော်ဦးအား အမျှဝေမည်ဟု ဖခင်ဖြစ်သူပြော
ရှစ်လေးလုံးငွေရတုအထိမ်းအမှတ်တွင် ဒဏ်ရာရရှိနေသောမ၀င်းမော်ဦးကို သယ်ဆောင်နေသည့်သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံအား ကြည့်ရှုနေသူတစ်ဦး(ဓာတ်ပုံ − ငြိမ်းချမ်းနိုင်/အီးပီအေ)
ရှစ်လေးလုံးအရေး တော်ပုံအတွင်း သေဆုံးသွားသည့် အဋ္ဌမတန်းကျောင်းသူ မ၀င်းမော်ဦး၏ အမျှဝေပွဲကို ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွှတ်ပေးပြီးမှ အမျှဝေမည်ဟု မ၀င်းမော်ဦး၏ ဖခင် ဦးဝင်းကြူက ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦး ဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အဖွဲ့သစ်တက်၍ သမီးဖြစ်သူ၏ အမျှဝေပွဲ ပြုလုပ်ရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သော်လည်း ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်းသားများက ၎င်းတို့လွတ် မြောက်မှသာ အမျှဝေပွဲပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုသောကြောင့်ဟု ဦးဝင်းကြူက ပြောသည်။
‘‘ပထမတုန်းက ဧပြီလထဲမှာ အမျှဝေဖို့စီစဉ်ထားတာ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ၊ ကျောင်းသား တွေကို အားပေးစကားသွားပြော တဲ့အခါကျတော့ ကျောင်းသား တွေကရော၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေရော သူတို့က ကျွန်တော့် ကိုတောင်းဆိုတယ်။ သူတို့ထွက် လာမှ၊ အကျဉ်းသားတွေထွက်လာ မှ အစ်မရဲ့ အမျှဝေပွဲကို လုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလို့ သူတို့ကိုစောင့်တော့မယ်။ ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထွက်လာမှပဲ အမျှဝေတော့မယ်’’ဟု ဦးဝင်းကြူက ပြောသည်။
မ၀င်းမော်ဦး၏ မိဘများ သည် သမီးကွယ်လွန်ပြီး ၂၇ နှစ်ကြာချိန်အထိ အမျှမပေးဝေရသေးပေ။ ဒီမိုကရေစီမရမချင်း အမျှမဝေရန်မှာကြားခဲ့၍ ၎င်း၏ မိဘများက အမျှ မပေးဝေသေးဘဲ စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကာလ က သေဆုံးမည့်နေ့၌ ဈေးရောင်း နေရာမှ ဆန္ဒပြပွဲသို့ လိုက်ပါသွား သော မ၀င်းမော်ဦးသည် ဆူးလေ ဘုရားလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်း ထောင့်၌ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ ကြောင်း မိခင်ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်းက ပြောသည်။
သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ သော မ၀င်းမော်ဦးကို ဆရာဝန် နှစ်ဦးက ဆေးရုံပို့ရန် ကားရှိရာသို့ ချီမသွားစဉ် နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦးက ဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင် နိုင်ခဲ့ရာ ယင်းမှာ သမိုင်းဝင်ပုံဖြစ် ခဲ့သည်။ ထိုဓာတ်ပုံသည် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်ထုတ် Newsweek မဂ္ဂဇင်း၌ ပါရှိခဲ့သည်။ မ၀င်းမော် ဦးသည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ သေ ဆုံးခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ထောင် ထဲ၌ အကျဉ်းကျနေသော နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသား ၉၄ ဦးနှင့် တရား ရင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၄၀၀ ကျော်ရှိနေ ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ (AAPP)တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးဘိုကြည်က ပြောသည်။
‘‘ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်က ကာ လုံထဲမှာတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားကိစ္စကို အဓိကဆွေးနွေးလိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစား ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျဉ်း ထောင်တွေရဲ့ သော့က ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ကာချုပ်ဆီမှာပဲရှိ တယ်။ ဘယ်လောက်ထိမြန်မြန် ဆန်ဆန်ဖြစ်မလဲဆိုတာက စောင့် ကြည့်ရမှာပါ။ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လည်း ဒီဟာက အဓိကဦးစားပေးကိစ္စထဲမှာပါ နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဘက်က အစွမ်းကုန်ကြိုးစား လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံ ကြည်ပါတယ်’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အစိုးရသစ်အား အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို နံပါတ် (၁) ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ပေးရန် ၈၈ ငြိမ်း/ပွင့်ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးက မတ်လ ၃၀ ရက်တွင် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
via News http://ift.tt/1RTM0zr http://ift.tt/1Vus636